निदान अस्पताल मिर्गौला ‘तस्करी काण्ड’ : प्रत्यारोपण गर्ने बेला डा पुकारले कुरा गरेको अडियोमा के छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
निदान अस्पताल मिर्गौला ‘तस्करी काण्ड’ : प्रत्यारोपण गर्ने बेला डा पुकारले कुरा गरेको अडियोमा के छ? कमजोर मुद्दा लगाउने प्रहरी तयारी
मंगलबार, कात्तिक १९, २०७६, ०८:२६:००
काठमाडौं- मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले मिर्गौला तस्करी काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा पुल्चोकस्थित निदान अस्पतालका चिकित्सकसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। २० दिन लामो अनुसन्धान गरेको मानव बेचबिखन ब्युरोले अनुसन्धानबाट नयाँनयाँ तथ्यसमेत खुल्न थालेको प्रहरीले दाबी गरेको छ।
प्रहरीले गत असोज २९ गते मिर्गौला तस्करी काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा निदान अस्पतालका सिइओ विपेन्द्र प्रधान, अस्पतालका कानून अधिकृत कुदुमकुमार भट्टराई, डा राजेश पन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामचन्द्र आले र मिगौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति रामेछाप दोरम्बा-३ का शंकर लामा योञ्जनमाथिको अनुसन्धान टुंग्याएको छ।
घटनाको अनुसन्धान गरेका ब्युरोका डिएसपी राजकुमार सिलवालले अनुसन्धान सकिएको र मंगलबारसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरिने बताए। यो बीचमा केही नयाँ तथ्यहरु फेला परेका छन्।
कीर्ते फोटामा ४ वटा औंठा छाप
शंकर लामा योञ्जनको शरीरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि उनकै भान्जा सञ्जीव घिसिङ मिर्गौला दिन तयार भएको भन्दै गत असार २० गते दोरम्बा गाउँपालिकाबाट मामा-भान्जाको नाता प्रमाणित गरिएको थियो।
उक्त नाता प्रमाणित गरिएको प्रमाणपत्रप्रति नै शंका उत्पन्न भएको छ। यसबारे भान्जा भनिएका सञ्जीवलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलाए पनि उनी उपस्थित भएनन्। प्रहरीले उनको खोजी जारी राखे पनि अहिलेसम्म उनी फेला पर्न सकेका छैनन्। यसबाट उक्त नाता प्रमाणित कागजात नै शंकाको घेरामा रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
‘उनी भान्जा नै हुन्थे र साँच्चिकै नाता प्रमाणित भएको हो भने भन्न सक्नु पर्थ्यो,’ ब्युरोका डिएसपी सिलवाल भन्छन्, ‘भान्जा भनिएका व्यक्ति नै फरार भएपछि नाता प्रमाणित गरिएका कागजातमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ छ।’
अर्कोतर्फ उक्त नाता प्रमाणित गरिएको प्रमाणपत्रमा फोटो टाँस भएको ठाउँमा ४ वटा औठा छाप भएको पाइएको छ। उक्त औंठा छापा सञ्जीवको हो/होइन भन्ने पनि उनी फरार भएकाले पुष्टि हुन सकेको छैन। अर्कैको फोटो उप्काएर काभ्रेका ३६ वर्षीय मनोज लामा (नाम परिवर्तन)को फोटो टाँस गरेर उनकै मिर्गौला झिकेर शंकरको शरीरमा प्रत्यारोपण गरिएको थियो।
आफ्नो फोटो टाँस भएपछि मनोज लामाले औंठा छाप लगाएको बताएका छन्। अघिल्लो पटकका दुईवटा र पछिल्लो दुईवटा गरेर ४ वटा औंठा छाप देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त औंठा छाप फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइए पछि रिपोर्ट आइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
मोबाइल पनि फरेन्सिक जाँचका लागि विधि विज्ञानमा
प्रहरीले अस्पतालका अन्य कर्मचारी, पीडित व्यक्तिलगायत सँग बयान लिइसकेको छ भने पक्राउ परेकाहरुको मोबाइल बरामद गरेर अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको छ। यसबीचमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले मिर्गौला प्रत्यारोण गरेका डा पुकार श्रेष्ठसँग कुरा गरेको अडियो रेकर्डसमेत प्राप्त गरेको थियो। यसबारे जानकारी दिँदै ब्युरोका एसपी गोविन्द थपलियाले भने, ‘डा पुकारसँग कुरा गरेको अडियो फेला पर्‍यो। तर मिर्गौला तस्करीबारे कुरा गरेको पाइएन।’
उनीहरुको बीचको कुराकानी मिर्गौला तस्करीबारे नभएको प्रहरीले दाबी गरेको छ। यद्यपि, सो के कुरा भएको थियो भन्नेबारे प्रहरीले खुलाएको छैन।
उनीहरुको मोबाइल फरेन्सिक जाँचका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको भए पनि त्यसको रिपोर्ट आइनसकेकाले केही भन्न नमिल्ने प्रहरीले जनाएको छ।
डा. पुकारलाई जोगाउने पक्राउ परेकाको बयान
पक्राउ परेका व्यक्तिले पनि मिर्गौला तस्करी डा. पुकारलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले प्रहरी समक्षको बयानमा भनेका छन्, 'उहाँलाई केही थाहा छैन। हामीले सबै ठिक छ भनेपछि उहाँले अप्रेसन गर्ने हो।’
तर मिर्गौला दिने व्यक्ति अर्कै भएको भन्दै १ दिन पहिला नै अस्पतालमा कुरा उठेको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार यस विषयमा डा पुकार समेत जानकार थिए। तर पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले भने यो कुरा स्वीरकार गर्न तयार छैनन्। पक्राउ परेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामचन्द्र आलेले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकार नै नभएको बयान दिएका छन्।
उनले प्रहरीको बयानमा भनेका छन्, 'सधैंजस्तो कागजात मिलाएर ल्याउनु हुन्थ्यो। ठिकै होला भनेर राम्रोसँग नहेरी हस्ताक्षर गरेको थिएँ।’ उनले हस्ताक्षर हुनु नै ठूलो प्रमाण भएको एसपी थपलिया बताउँछन्।
कमजोर मुद्दा लगाउने प्रहरी तयारी
गत असोज २९ गते पक्राउ परेका निदानका सिइओसहित ५ जनाबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मलेनमा प्रहरीले उनीहरुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिने जनाएको थियो।
पछि ब्युरोले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि सोही कुरा उल्लेख थियो। तर प्रहरी स्वयम् अहिले भने कमजोर मुद्दा लगाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्ने तयारीमा छ। प्रहरीले सुरुका दिनमा मानव बेचबिखन तथा असोरपसार नियन्त्रण ऐनको कसुर लगाएर म्याद थप गरेको थियो।
पक्राउ परेका सबैजसो मिर्गौला तस्करी भएको कुरालाई उन्मुक्ति नपाउने बुझेकाले उनीहरुले यो मुद्दा मानव बेचबिखन नभई मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन २०५५ अनुसार भएको जिकिर गरेका थिए। यस ऐन अनुसार मुद्दा चलेमा उनीहरुलाई बढीमा ५ वर्ष कैद तथा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। जसकारण उनीहरु ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमै रिहा पनि हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।
तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अन्तर्गत मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद तथा २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार उनीहरुले प्रहरीले कमजोर मुद्दा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन २०५५ अनुसारको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ।
भान्जादेखि फुपु र दलालसम्म अझै फरार
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति शंकरलालका छोरा पक्राउ परेको अवस्थामा मिर्गौला तस्करीका सम्पूर्ण पाटा खुल्ने प्रहरीका अधिकारी स्वयमले बताउँदै आएका छन्। तर सम्पूर्ण पाटा खुल्ने ती व्यक्ति शंकरलालका छोरा भने अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। यसबारे ब्युरोका डिएसपी सिलवाल भन्छन्, 'खोजी जारी छ। तर अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएन।’
सबैले शंकरलालकै छोरालाई दोष देखाएर उन्मुक्ति खोज्न लागेका उनी स्वयम् पक्राउ नपरेकै कारण मुद्दा कमजोर बन्ने देखिन्छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति शंकरलालले सबै कुरा छोरालाई थाहा भएको बयान दिनु, पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिले भने फोटो उनैले साटेको भन्ने आरोप लगाएर उन्मुक्ति लिन खोजेका छन्। तर उनी नै पक्राउ नपरेकाले मुद्दा कमजोर बन्ने देखिन्छ।
त्यस्तै दलाल भनिएका अर्का व्यक्ति, भान्जा भनेर सुरुमा फोटो टाँस गरिएका भनिएका सञ्जीव, उनका फुपु पनि फरार छन्। उनीहरुको खोजी जारी राख्दै फाइल पेस गर्ने तयारीमा प्रहरीको ब्युरो छ।